Maalinta: 11-ka July, 2017
15 ee Batman si ay u siiyaan adeegyo bilaash ah oo loogu talagalay dhammaan basaska bishii July
Dhammaan basaska waxay bilaash ku noqon doonaan bisha Luulyo 15 markay tahay Batman: Dhammaan basaska ku dhex jira Maamulka Degmooyinka Batman iyo Agaasime-hoosaadyada waa lacag la'aan 15-ka Luulyo. Sabtida, Luulyo 15, 2017 [More ...]
250 Milyan Euro oo Saxiixa Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul
Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul, oo wax ka badali doonta xeerarka ciyaarta ee duulista hawada; 6 ayaa la saxeexday heshiis qoondeyn boos ah oo ay la gashay shirkadda Cargo City iyo Ground Handling Campus. MNG, PTT, Celebi Air Service, HAVAS, Nidaamka [More ...]
Midowga Yurub maalgeliyey Mashaariicda Gaadiidka lagu soo bandhigay doonaa Sirkeci Tareen Station ah: Republic of Turkey iyo fuliyay by Midowga Yurub, Gaadiidka Barnaamijka Hawleed (UOP), bandhig ah sawirrada ogaaday gudahood mashruuca, Sirkeci Tareen Station in 14-15-16 July [More ...]
Waxaa jira gaadiidka gaadiidka ee Kocaeli!
Waxaa yimid Kocaeli gaadiid safri ah! : Xarunta Isuduwidda Gaadiidka (UKOME) waxay go’aansatay inay sare u qaado gaadiidka kulanka July. Intaa waxa u dheer, tikidhada tareenka ayaa la go'aamiyay. [More ...]
Maalinta koowaad ee sanadka cusub ee Iskuullada Gaadiidka ee Magaalada Istanbul: Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul (IMM) ayaa furi doona iskuulada Isniinta, Sebtember 18-06.00-14.00 oo gawaarida gaadiidku ay noqon doonaan bilaash. [More ...]
Magaalada London, dadka isticmaala 1 waxay u neefsataa 12 in ka badan hal malyan oo hawo ah sunta sunta daqiiqadii!
Isticmaalayaasha Subway ee London 1 waxay neefsadaan in ka badan 12 milyan oo sun ah hawo sun ah daqiiqaddiiba! 12 daqiiqaddii Khatarta waallida waxaa laga yaabaa inay ku soo baxaan dadka neefsanaya in ka badan milyan oo ah sunta hawo sunta ah ee adeegsada tareenka 1 12 daqiiqaddii [More ...]
Laga soo bilaabo Qodobka Shidaalka ee Qatar ee Sarkaalka Gaadiidka-Sen
Gaadiidka ka yimaada Ururka Wadada tareenka ee Qadar una gudbiya Memur-Sen: Gudoomiyaha Ururka Railway Qatar Ad DEKAD Ad Adem Şahin iyo xubnaha guddiga ee ururka ayaa booqday Duqa Cankesen. Intii kulanku socday, gudoomiye Cankesen DEKAD [More ...]
Shahaadada horudhaca ah ee aan hore loo dhigin
Heshiiska horudhaca ah, ma aha magacaabistii: Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul waxay soo gabagabaysay qandaraaska dhismaha shaqooyinka elektaroonigga ah ee xariiqda metro ee 2016 halkaas oo lagu guddoonsiiyay hindise ka sareeya. Kaqeybgalka hindisada mudnaanta leh iyo [More ...]
Rakibaadda saldhigyo cusub ayaa laga bilaabay Mashruuca Başkentray: Rakibaadda saldhigyo cusub ayaa laga bilaabay Mashruuca Başkentray, kaasoo kordhin doona adeegga magaalada hareeraheeda ah illaa heer tareenka dhulka hoostiisa ah ee Ankara. 5 gudaha Başkentray halkaas oo lagu rakibo tuubooyin cusub [More ...]
Maalinta Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli
Maalinta Hike ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli: Arrinta taraafikada ee khidmadaha gaadiidka dadweynaha, oo ajandaha ku jiray bilo ka mid ah Kocaeli, ayaa la filayaa in lagu go'aamiyo kulanka UKOME ee ka bilaabmi doona 11.00 maanta. Qolka 2.50 TL Minibuses Room, weyn [More ...]
RayHaber 11.07.2017 Warbixinta Shirka
Cusboonaysiinta Dhismaha Waxaa Lagu Sameyn Doonaa Khadka Mashiinka Dayactirka Qalliinka Waxaa La Sameyn Doonaa Dayactir Iyo Dayactirka Shaqada Guryaha Adeegga ee Xarunta Doğanşehir Saldhigga Nidaamka Kaameeraha Amniga Nidaamka ku saleysan IP-ka ayaa la iibsan doonaa. [More ...]
IZBAN Nidaamyada Gawaarida: Nidaamka Isgaadhsiinta ee IZBAN (IZBAN), oo wata rakaab rakaab ah oo ku yaala Izmir, ayaa ka soo horjeeda xaalada iyadoo la socota jilbaha iyo qaylo-dhaanjirnimada. [More ...]
Gaadiidka Ankara waa lacag la’aan 15 Luulyo: Metro iyo Ankaray oo ay leedahay Ankara Metropolitan Municipal EGO Buses; 15 Sannad-guuradii koowaad ee isku daygii afgambi ee khiyaanada ahaa ee bishii Luulyo, waxaa loogu talagalay in maal-gashadayaasha ka qayb-qaataan nashaadaadka xusuusta. [More ...]
Ku xoog sheegashada Konya waxay ka dhigan tahay in Sarajevo ku xoogsato: Gudoomiye kuxigeenka xisbiga AK Party, Konya kuxigeenka Ahmet Sorgun iyo duqa magaalada Konya Metropolitan Tahir Akyürek, Bosnia iyo Herzegovina Wasiirka Xuquuqda Aadanaha iyo Qaxootiga. [More ...]